Ihe mgbochi mmiri: Gịnị bụ ụzọ kachasị mma iji wepụ ọdịnaya site na weebụsaịtị?
Nchịkọta data bụ usoro nke wepụ ọdịnaya site na iji ngwa pụrụ iche. Ọ bụ ezie na nchịkọta data yiri ụda okwu, ọ nwere ike iji ngwa ngwa ma ọ bụ ngwa ngwa ngwa.
A na-eji ngwaọrụ ndị a wepụ data ị chọrọ site na ibe weebụ dịka o kwere mee - transporte europaweit. Ngwaọrụ gị ga-arụ ọrụ ya ngwa ngwa ma dị mma n'ihi na kọmputa nwere ike ịmatakwu ibe ha n'ime nanị minit ole na ole n'agbanyeghị otú nnukwu ọdụ data ha dị.
Ị nwetụla mkpa iji weghachite ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị isi ọdịnaya? Ụzọ kacha mma ị ga-eji bụ ịchacha ọdịnaya niile ma chekwaa ya n'otu nchekwa. Ikekwe ihe niile ị chọrọ bụ ngwa ma ọ bụ ngwanrọ nke na-ewe URL nke ebe nrụọrụ weebụ, na-enyocha ihe niile ma chekwaa ya na folda a chọrọ.
Nke a bụ ndepụta ngwá ọrụ ị nwere ike ịnwa ịchọta ihe ga-emetụta ihe niile ị chọrọ:
2. Jiri "Save As"
Ị nwere ike iji "Save As" nhọrọ maka ibe weebụ ọ bụla. Ọ ga-echekwa peeji nke ọ bụla n'ime ihe mgbasa ozi niile. Site na ihe nchọgharị Firefox, gaa Ngwá Ọrụ, wee họrọ Ama Ama Ama ma pịa Mgbasa ozi..Ọ ga-abịa na ndepụta nke mgbasa ozi niile ị nwere ike ibudata. Ị ga-enyocha ya wee họrọ ndị ịchọrọ wepụ.
Ị nwere ike iji GNU Wget jidere ebe nrụọrụ weebụ niile na anya nke anya. Otú ọ dị, ngwá ọrụ a nwere ntakịrị azụghachi. Ọ pụghị ịhapụ faịlụ CSS. E wezụga nke ahụ, ọ nwere ike ịnagide faịlụ ọ bụla ọzọ. Ọ na-ebudata faịlụ site na FTP, HTTP, na HTTPS.
4. Mfe HTML DOM Parser
HTML DOM Parser bụ ngwá ọrụ ọkpụkpụ ọzọ dị irè nke nwere ike inyere gị aka wepu ọdịnaya niile na ebe nrụọrụ weebụ gị. O nwere ụfọdụ ndị ọzọ dịka ndị ọzọ dị ka FluentDom, QueryPath, Zend_Dom, na phpQuery, nke na-eji DOM kama ịgbanye Ụkwụ.
A ga-eji ihe a kpuchie ọdịnaya niile nke ebe nrụọrụ weebụ gị. Rịba ama na nchịkọta ọdịnaya abụghị ọrụ ya naanị, n'ihi na enwere ike iji ya maka ule, nlekota, ntanetị data na ntanetị weebụ.
6. Jiri iwu nke enyere n'okpuru ebe iji wepu ọdịnaya nke ebe nrụọrụ weebụ gị tupu ịtọwaa ya:
Ikwesịrị ịnwale nke ọ bụla n'ime nhọrọ ndị a edepụtara n'elu, ebe ọ bụ na ha niile nwere isi ike ha. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ iwechapụ ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ, ọ ka mma ịkọwa ndị ọkachamara ntanetị weebụ, n'ihi na ngwaọrụ ndị a nwere ike ọ gaghị enwe ike ijikwa nnukwu mpịakọta ahụ.